Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Onye isi oche Skål Asia: Zute nwa akwukwo Andrew J. Wood
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Andrew J. Osisi
Onye isi oche Skål Asia Andrew J. Wood taa kwupụtara na ọ ga-azọ maka ntuli aka maka Onye isi ala na ntuli aka 2021-2023 Skål Asia nke na-ewere ọnọdụ na August 25, 2021.
Mkparịta ụka ya na onye isi oche onye isi oche nke Skål Asia Andrew J. Wood na Dr. Scott Michael Smith, Onye Nchịkwa Agụmakwụkwọ Mahadum Assumption nke Ngalaba Ọbịa na Nleta Njem Nleta.
Nhoputa Wood maka isi nke Skål Asia kachasị ọrụ abụrụ ọtụtụ ihe ijuanya.
Ọ bụ onye kachasị ogologo oge na-arụ ọrụ na ndị isi Asia ma bụrụkwa onye isi nke ndị isi oche atọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Osisi batara na bọọdụ Skål Asian Area (SAA) afọ iri na isii gara aga dịka Onye isi mmepe Development 16-2005 wee nwee ọfịs VP ugboro abụọ, nke mbụ n'oge 2009-2009 na nke kachasị nso kemgbe 2010 ruo ugbu a.
Wood bụ onye bụbu onye isi ala nke Thailand National Committee 2012-14 ma bụrụ onye isi ugbu a nke Skål Bangkok Club, ọkwa nke mbụ o mere na 2008-10 na ọzọ 2018-ugbu a.
Na 2010 Wood sonyeere Executive Board nke Skål International dịka onye isi. Ọ bụ onye otu Skål na-akwanyere ùgwù nke ukwuu ma chọọ ya mma na Wood nwere afọ 29 nke ọrụ pụrụ iche. O doro anya na osisi abụghị naanị ahụmịhe na nka iji duru Skål Asia mana ọ na-eweta tebụl nnukwu ndekọ ọrụ na Skål International, honed ruo ọtụtụ afọ.
Akụ na ụba nke ihe ọmụma na kọntaktị nke Wood - ma n'ime Sk butl mana ọ dịkwa mkpa na ọkwa ụwa nke njem na njem njem - na - eme ka ọ bụrụ ezigbo nwa akwukwo. Nwa amaala UK, nke nwere ọmarịcha ọrụ ile ọbịa na Thailand, ụlọ a nakweere Wood kemgbe afọ 30 gara aga, ahụla onye isi njikwa a nwere ahụmahụ na-achịkwa ụfọdụ ụlọ oriri na ọ finụ theụ kachasị mma nke mba ahụ, yana ebe ntụrụndụ, gụnyere Royal Cliff Group of Hotels. Ebe a na-akpọ Royal Cliff Resort bụ ebe ọbịa nke 2006 Skål World Congress siri ike.
Na 2019, enyere ya Skål's Membre D'Honneur ma bụrụ onye nnata nke Sk ofl Order of Merit, nke Onye isi ala Mok Singh gosipụtara na 2013 ma bụrụ onye natara Sk ofl's Award, nke Onye isi ala Peter Morrison nyere na 2020.